Ọ bụ Ikpeazụ 10 Pasent | Martech Zone
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, anyị enweela ọpụpụ iri na abụọ nke ọrụ ọhụrụ na ngwa anyị na njikọta anyị. O bu ihe nwute, anyi nwekwara oru ole na ole malitere otutu, otutu onwa gara aga tupu m rute nke na adighi njikere maka mmeputa. Ọ bụghị ndị otu kpatara, mana ọ bụzi ọrụ m ga-arụpụta.
Enweghị mgbagha na enwere m otu egwuregwu na teknụzụ ziri ezi. Mana 90% nke ọrụ emeela ogologo oge.
Nke a bụ atụmatụ iji nweta anyị karịa 10% ikpeazụ:
Mee ka ndị mmepe gị gosipụtara ọrụ ahụ.
Ihe ederede ederede na-agbanwe oke oke ma nweta nnabata site na otu ihe kpatara mgbanwe ndị a ji dị mkpa.
Nweta nkwekọrịta na mgbe a ga-emecha mgbanwe ndị a.
Hazie ihe ngosi ọzọ.
Gaa kwụpụ 1.
Ozugbo oru ngo na-egbu oge, ihe egwu na-abawanye n'ezie na ọ ga-egbu oge ọzọ. N'oge gara aga ọrụ, M n'ezie nụrụ ude nke enyemaka mgbe a n'obi imecha na-agbaji… n'ihi na ọ aka ekedep oge maka mmecha. Ndị ọrụ na-achọkarị ịrụ nnukwu ọrụ na ndị mmepe ọkacha mmasị na-egosipụta ikike ha.
Anyị nwere ngosi maka otu izu ma ọ bụ karịa gara aga nke anaghị agabiga nke ọma. Ndị mmepe gosipụtara n'oge na-adịghị anya, ha jiri aka ha malite arịrịọ (obere ihe mbanye anataghị ikike), mgbe ahụ azụmahịa ahụ dara. Mgbe ọ dara, ịgbachi nkịtị. Na ịgbachi nkịtị. Na ụfọdụ ndị ọzọ. Anyị kwurịtara ụfọdụ ihe ngwọta ga - ekwe omume wee jiri nwayọ mechie ngosi ahụ.
Mgbe ngosi ahụ gasịrị, agwara m onye nduzi mmepe na o mesiri m obi ike na ọrụ a zuru 90%.
Akọwaara m ya na 90% pụtara 0% na ahịa. 90% pụtara na emezughi ihe mgbaru ọsọ. 90% pụtara na atụmanya atọrọla na atụmanya na ndị ahịa ezuteghị. Ezie na m ekweta na 90% bụ ọtụtụ n'ime ndị ọrụ, ọ bụghị a ịga nke ọma ruo mgbe ikpeazụ 10% na dechara. Nke ahụ na-agbakwunye ruo 100% n'ụzọ;).
Izu a, anyị hụrụ ngosi ahụ ọzọ na ọ bụ ihe mara mma. Ugbu a, anyị na-agbanwe ngwaahịa ikpeazụ ma enwere m obi ike na anyị ga-ahapụ izu ndị na-abịanụ mgbe anyị nyefere ndị ahịa anyị. M hapụrụ ndị otu ahụ ka ha mara nnukwu ọrụ ha rụrụ na otu anyị si nwee ekele maka ọrụ ahụ. Ọ bụghị a homerun… nke ahụ ga-abụ mgbe anyị na-arụpụta njikere ma ntọala na-maa kwajuru.
Additionalfọdụ ndụmọdụ ndị ọzọ:
Na-ekwenye oge ọ bụla.
Mgbe mgbanwe ọ bụla chọrọ, gụgharịa usoro iheomume wee bịa na nkwekọrịta ọzọ.
Hazie ihe ngosi a na otutu oge ka ndi otu wee kwado.
Setịpụ ihe ndị ị ga-atụ anya na ihe ngosi ahụ. Mee ka ndị otu ahụ mara na obi dị gị ụtọ!
Mee ka ìgwè ahụ nọrọ jụụ na ịmara na nsogbu nwere ike ibilite, ị na-atụ anya na ha agaghị eme ya.
Na-akwado, echela ka ọdịda wee wakpo.
Otuto n'ihu ọha, na-akatọ na nzuzo.
Emela, n'ọnọdụ ọ bụla, jiri ihe ngosi dị ka ohere iji kpalie ihere. Ga - akpali ndị mmemme gị ịchọ ọrụ!
Agba nke ọma.
Cheta na 10% ikpeazụ bụ nke kacha sie ike. Ọ bụ 10% ikpeazụ na-eme ma na-agbaji azụmaahịa. Atụmatụ, nkwadebe na igbu na 10% ikpeazụ ga-eme ihe dị iche.
Tags: MgbakwunyeMgbakwunye mmemmeCBSụlọ ọrụ ịde blọgụdataFrank DaleAjụjụ ọnụazụmahịa obodoAzụmaahịavalidate
Akwa post. Echere m na ị bụ eziokwu na 10% ikpeazụ bụ ihe siri ike.